पुदिनाको सेवन गर्नाले हुन्छन् यी फाइदाहरु !! जानकारीको लागि शेयर गराैं । | सुदुरपश्चिम खबर
पुदिनाको सेवन गर्नाले हुन्छन् यी फाइदाहरु !! जानकारीको लागि शेयर गराैं ।
हैजा लागेका व्यक्तिलाई पनि पुदिनाको रस र प्याजको रस मिसाएर दिँदा निकै फाइदा गर्छ । पुदिनालाई मनतातो पानीमा नुन मिसाएर कुल्ला गर्दा घाँटीमा भएको समस्या हल हुन्छ, यसले आवाजलाई पनि प्रष्ट बनाउन सहयोग गर्छ ।तर, पुदिनाको सेवन अत्यधिक भने गर्नु हुँदैन । यसले हाम्रो आँतलाई समस्यामा पार्न सक्छ
यो पनि पढ्नुहोस् ःसमयमा सुत्ने समयमा उठ्न गर्नाले हुन्छन् यस्ता फाइदा !!ःनिद्रा त हाम्रो लागि कुनै वरदान भन्दा कम होइन । तर, यो व्यस्त जीवनमा हाम्रो निद्रा बारम्बार डिस्टर्ब भइ नै हाल्छ । जे भए पनि दिमागलाई फ्रेस बनाउन होस् या शरीरका अन्य अंगलाई आराम दिन नै किन नहोस्, हामीलाई आरामको जरुरत निकै पर्छ ।
संसारकै भाग्यमानी हुन्छन, यस्ता मानिसहरू !
किशोरीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा नेवि संघ जनज्योतिका इकाई अध्यक्ष पक्राउ !